Waxaa jira in ka badan 13 milyan oo mugga shixnaddaas oo sannad Apple TV oo adduunka oo dhan. Dadka qaadan si ay u isticmaalaan si ay u sii qulquli videos ka Mac shaashada weyn, isagoo TV Apple ee gacmaha laga wadaa in aad muraayad karaa wax kasta oo Mac in TV muuqan. Dhab ahaantii, waxaa jira siyaabo kala duwan si ay u sii qulquli 2 videos ka Mac si Apple TV ku salaysan dalabaadka iyo baahida kala duwan. Bal aan caddeeyo aragtida ah la talaabooyin si faahfaahsan. Fadlan riix halkan si uu u ogaado habka ay u sii qulquli videos ka iPhone / iPad / iPod in TV Apple .
Part One - Jidka si AirPlay Video ka Mac si Apple TV la Lugood
1. Hagaaji Lugood si aad u nooca ugu dambeeya, sababtoo ah sidan u baahan Lugood 10.2 ama ka dib. Guud ahaan, fariin update arbushin doonaa marka aad Lugood furi. Ama waxaad riixi kartaa cawinaada> Hubi upates.
2. Connect Apple TV shaashada weyn oo hubi update aad, waxay u baahan tahay jiilka 2aad ama 3aad, shid airplay goob.
3. Hubi in TV Apple iyo Mac hoos shabakad isku mid ah, waxay u baahan tahay Wi-Fi network (802.11a / g / n).
4. Open Lugood, hel oo guji icon AirPlay ah, taas oo muujinaysa bidixda ee Lugood, soo socota si ay gacanta mugga ama meel kale oo ku xiran Lugood version. Dooro qalabka aad doonaysid in aad sii qulquli ku salaysan multimedia kala duwan. Haddii aad rabto in aad sii qulquli sawiro ama videos, dooran TV Apple. Inkasta oo haddii aad rabto in aad sii qulquli music, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay garoonka diyaaradaha Express in ay gacanta ku hadla ama helaya kuwa. Waa maxay waxa ugu fiican waa ku hadla iyo kuwa qaata yihiin AirPlay-karti.
5. Markaas wax kasta oo Lugood tusi doonaa TV si toos ah. Iyo Lugood noqon doonaan guddi ay gacanta.
Part Two - Jidka si AirPlay Mirroring Video ka Mac in TV Apple
In kastoo dadka isticmaala airplay karo files warbaahinta in TV Apple, waxaa xaddidaya users maxaa yeelay waxa ay taageertaa dhowr ah oo kaliya qaabab warbaahinta ugu weyn. Sidaa darteed, mirroring AirPlay yimaado si ay u xaliyaan dhibaatooyinkoodii oo dhan, oo muraayad karaa wax kasta oo Mac shaashada weyn si toos ah via TV Apple.
Ma jiro wax faraq u dhexeeya kuwa badan 2 siyaabaha, marka laga reebo waxyaabaha soo socda:
1. AirPlay mirroring waxaa laga heli karaa oo keliya marka aad u cusboonaynta qalabka ay u version ugu dambeeyey:
TV Apple waa inay noqdaan jiilka 2aad ama ka dib la software update v5.0 ama ka dib
Mac OS waa in loo casriyeeyo si ay u OS X Mountain Libaaxa ama ka dib
2. button AirPlay mirroring wuxuu muujin doonaa Mac bar menu si toos ah haddii aad Mac taageertaa shaqada iyo hoos shabakad isku mid ah. Waxaa Riix si aad u doorato qalabka aad doonaysid in aad muraayad.
3. Waxa ay taageertaa in ay tayadoodii tayada image adigoo isticmaalaya model ku habboon xal. 2 fursado aad u: dhigma xajmiga desktop in TV Apple ama Mac taasi ku xiran tahay shuruudaha aad.
All oo dhan, waxaa jira siyaabo kala duwan si ay u wadaagaan aad files warbaahinta gudaha si ay TV, la daadan TV Apple waa mid ka mid ah habka ugu wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa weli jira xadeynta qaar ka mid ah sida version iyo qaab yari. Haddii aad u baahan tahay qaar ka mid ah software awood leh, oo sii qulquli karaan dhammaan faylasha warbaahinta inay si toos ah TV ka qoomameynayaa xadeynta kuwa, waxaad ka fekeri kartaa Wondershare Video Converter Ultimate. Download version maxkamad free hoos ku qoran.
Xalinta Dhibaatooyinka Dhignaashada for TV Apple
Ma ciyaari karo MP4 on Apple TV? Xalliyo.
> Resource > Mac > Sida loo sii qulquli Video ka Mac in TV Apple